Mandinika indray ny Lalàna mifehy ny Fikomiana ny fitondrana Trinite & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Tsy voatery midika hoe fanesorana ny fijerena indray ny lalàna
Voadika ny 02 Oktobra 2019 5:37 GMT
Sarin'ny mpitarika ny sendikan'i Trinite sy Tobago, Watson Duke, nalaina tamin'ny horonantsary YouTube nandritra ny tati-baovao izay nilazany fa miatrika fanavakavahana ireo mpamono afo Tobagoniana. Nosamborina araka ny lalànan'ny Fikomiana tamin'ny 26 aogositra 2019 i Duke. Lahatsary navoakan'ny TTT Live Online.
Ny fisamborana an'i Watson Duke vao haingana noho ny fanambarana nataony tamin'ny taona 2018 no nahafahana nanasongadina ny olan'ny tsy fitovian-kevitra – sy ny fomba itondrana izany. Nosamborina i Duke, filohan'ny Fikambanan'ny Servisim-Panjakana (PSA amin'ny teny Anglisy) ao Trinite sy Tobago sady mpitarika vitsy an'isa ao amin'ny Antenimieran'i Tobago (THA) satria heverina ho manitsakitsaka ny Lalànan'ny Fikomiana ao amin'ny firenena.ny fanambarana nataony.
Olo-malaza mampiady hevitra i Duke tenany, saingy ankoatra izany, niteraka adihevitra teo amin'ny vahoaka momba ny lalàna ny raharahany, ary eo am-pandinihana izany ankehitriny ny governemanta.
Nataon'ny mpampanoa lalàna Faris Al-Rawi, izay efa nahazo whita paper (taratasy fotsy) [filazana ilay lalàna sady fandraisana tolo-kevitra] momba ny lalàna, mazava tsara na izany aza, fa tsy midika hoe fanafoanana ny fandinihana ilay lalàna. Manondro ny tantara misafotofoton'ny fikomiana tao amin'ny firenena (ny revolisiona Black Power tamin'ny taona 1970 sy ny fikasana hanongam-panjakana tamin'ny taona 1990), hentitra ny mpampanoa lalàna fa tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerany ny endriny sasany.
Saingy tsy ny rehetra no miombon-kevitra. Tamin'ny taratasy ho an'ny mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Wired868, natambatr'i Tye Salandy tamin'ny “lalànan'ny marijuana, ny lalàna miady amin'ny firenireny sy ny lalànan'ny obeah (fankatoavana)” ny lalànan'ny Fikomiana mba ho “fitaovam-piadiana kolonialy natao hifehezana ny sampana polisy mainty sy zarazara hoditra ary manangana fiarahamonina mifanaraka indrindra amin'ny tombontsoa Eoropeana sy ny sangany”.
Novolavolaina tany am-boalohany teo ambanin'ny fitondrana fanjanahantany ho fomba hamoretana ny fikomiana sy hanampenam-bava ireo lahatsoratra mandrava hasina, nanaraka an'i Trinite sy Tobago taorian'ny fahaleovantena ny lalànan'ny fikomiana. Ny hevitr'i Salandy dia tsy hoe lany andro ihany ilay lalàna, araka ny voalazan'ny maro, fa “fanararaotana” sy “zara raha vita” ary “tsy manana toerana eo anivon'ny fiarahamonina maoderina”:
Nampiasaina ho fitaovam-piadiana indrindra ny lalànan'ny fikomiana ho fanoherana ny hetsiky ny sendikà, ny mpanao fihetsiketsehana Black Power ary ireo olona hafa izay naneho hevitra nifanohitra tamin'ny manampahefana mpanjanaka sy ny manampahefana taorian'ny fahaleovantena. Nitarika ny fahantran'ny firenentsika ireo lalàna ireo tamin'ny fandavana ny fahazoan'ny vahoaka fomba fijery isan-karazany, indrindra fa ny avy amin'ireo manana fomba fijery hafa.
Ny loza manokana avy amin'ny lalàna toy ny lalànan'ny fikomiana, raha ny fiaviany no jerena, dia manjavozavo izy ireo ary mety ho azo ampiasaina araka izay tiana amin'ny fotoana rehetra ka manohitra ny demaokrasiantsika sy ny fahalalaham-pitenenantsika.
Ny lalàna dia mamaritra ny fikomiana ho “mitondra fankahalana na fanamavoana, na miteraka ny tsy fitiavana ny governemanta na ny Lalàmpanorenana”.
Tamin'ny lahatsoratra iray hafa tao amin'ny Wired868, nanolotra ny fahalalany momba ny lalàna ny Mpanolotsaina ambony Martin Daly. Nilaza ho mahatsapa izy fa “natao ambany loatra ny toeran'ny fikasana hikomy”:
Na eo aza izany, dia tsy ekeko ny hanafoanana ny lalànan'ny fikomiana satria manohana ireo fandraràna ao anatiny aho mba tsy hiteraka na hampiroborobo fahatsapana finiavana ratsy sy fankahalana eo amin'ny ‘sarangan'ny mponina samihafa izay miavaka amin'ny firazanana, ny loko, ny fivavahana na ny asa’.
Ny ilaina dia fanavaozana maika ny lalàna mba handraisana ny fikasana hikomy amin'ny alàlan'ny fampidirana fepetra manokana fa ny hetsika sy ny fanambarana ràrana dia tsy maintsy ireo izay mandrisika an-katerena fihetsika mahery setra amin'ny fanjakana, ny governemanta na ny lalàmpanorenana.
Manonona ohatra olom-pirenena iray izay nanova endrika vao haingana hahafahany maneho hevitra tsy misy ahiahy tamin'ny fifanarahana fananganam-panorenam-panjakana iray mampiady hevitra izany, nanoro hevitra i Daly fa ny maodely Aostraliana momba ny fiarovana “fikasana tsara” manoloana ny fiampangana fikomiana no ilaina hametrahana fepetra mety amin'ny ny modely eo an-toerana. Nanampy i Daly hoe:
Ny Phantom, araka ny niantsoana azy, dia voalaza fa nanafina ny tenany noho ny tahotra ho voampanga ho manao fikomiana. Tiako indrindra ity sombin-tantara tsangana ity satria mandravaka ny tsipika manasaraka ny fandrisihana fankahalana sy fitadiavana mangarahara sy fitakiana tamberin'andraikitra hatrany—indrindra indrindra raha ny fitabatabana hoe “lainga” no valintenin'ny governemanta manoloana ny ahiahy mikasika izay mety hitranga ambadiky ny sehatra sasany.
Hoy i Salandy raha nametraka izany:
Ny tsara indrindra avy any Karaiba dia ny toetran'olona mora mikomy […] ny fandrosoana lehibe indrindra nataon'ny firenentsika dia avy amin'ity toe-tsaina fifaharana ity. Zon'ny olombelona ny maneho fomba fijery hafa, mametraka fanontaniana amin'ny manampahefana ary manohitra ireo lalàna tsy rariny.